Rugwaro rwekutanga Zuva Rako | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Mavhesi eBhaibheri 10 Rugwaro Kutanga Zuva Rako
10 Rugwaro Kutanga Zuva Rako
Nhasi tichange tichitarisana nemagwaro gumi ekutanga zuva rako. Hapana imwe nzira iri nani yekutanga zuva kupfuura neshoko raMwari. Shoko raMwari rinotakura simba izvo zvinokwana kuita kuti zuva redu rifambe zvakanaka. Rangarira iro Bhaibheri rakanyora kuti zuva nezuva rakazadzwa nehuipi, saizvozvowo kukomborerwa kwakadzika mukati mezuva nezuva. Shoko chairo raMwari rinotibatsira kugadzirisa zuva redu.
Kunyangwe iwe uri mushandi wemuhofisi kana bhizinesi munhu, iwe unoda izwi chairo kuita kuti zuva rako rive rakatsetseka uye risina chero chinoitika chakaipa. Izwi raIshe isimbiso uye chiyeuchidzo chekuti Mwari anotida uye Anotitarisa. Takateerera magwaro gumi aunogona kushandisa kutanga zuva rako.
Magwaro Ekutanga Zuva Rako
Mapisarema 118: 24 “Iri ndiro zuva rakaitwa naIshe; tichafara nokufarisisa mukati maro.
Unogona kushandisa chinyorwa ichi kuporofita muzuva iri. Rugwaro runoti zivisa chinhu uye zvichasimbiswa. Dudzira, kuti izuva iro rakagadzirwa nashe, uye uchafarisisa mukati maro. Izvi zvinoreva kuti hapana chakaipa chichauya nenzira yako muzuva idzva iri, hauzowirwa nechero chipi zvacho zvakaipa mamiriro ezvinhu muzita raJesu.
Mapisarema 88:13 “Asi ndakachema kwamuri, Ishe; Uye mangwanani munyengetero wangu uchamira pamberi pako.
Pane chimwe chinhu pamusoro pekufonera Mwari mangwanani. Kuti sei bhuku raPisarema richiti ndichafona kwauri mangwanani-ngwanani. Rangarira rugwaro runoraira kuti tinotsvaga Mwari pavanowanikwa, tinofanirwa kumudana kana Ari pedyo. Uyu munamato unoreva kuti kuvepo kwaMwari kunogara kuri padyo uye kuchikurumidza mangwanani. Verenga rugwaro urwu, namata kuna Mwari uye utende kuti munamato wako wapindurwa.
Mapisarema 90:14 “Tigutsei mangwanani netsitsi dzenyu; kuti tifare, uye tifarisise mazuva edu ose.
Uyu munyengetero kuna Mwari kuti atiropafadze netsitsi dzake. Rangarira kuti rugwaro runoti ndichave netsitsi kune wandichanzwira tsitsi uye kunzwira tsitsi wandinozova naye. Ichi chinyorwa che kuraira kuti Mwari vatiropafadze nengoni kuti tigofara mazuva ese. Kana tsitsi dzaMwari dzave nesu, maprotocol achaputswa uye zvinhu zvinowira munzvimbo zvisina kunetsekana.
Mapisarema 5: 3 “Inzwai inzwi rangu mangwanani, imi Jehovha; mangwanani ndichanongedzera munyengetero wangu kwauri, ndokutarira.
Chinyorwa ichi ndechekusimbisa zvakare chokwadi chekuti Mwari vanonzwa uye vanopindura minamato zvakanyanya mangwanani. Izvi hazvireve kuti Mwari haapindure minamato pane imwe nguva yezuva. Mwari vanopindura munamato nguva dzese. Nekudaro, zvakakosha kuti tinangise minamato yedu kuna Mwari mangwanani-ngwanani tisati tabuda mumba.
Mapisarema 143: 8 “Ndinzwisei unyoro bwenyu mangwanani; nekuti ndinovimba nemi; Ndizivisei nzira yandinofanira kufamba nayo; nekuti ndinosimudzira mweya wangu kwamuri.
Iri iPisarema remunamato wezuva redu kuti rifambe zvakanaka uye riite mushe. Iwo munamato wekuti nyasha dzaMwari dziuye patiri mangwanani-ngwanani. Zvakare, tinoda gwara kwezuva rega rega. Kana hupenyu hwedu husisina gwara kukanganisa kunodzivirirwa. Iri iPisarema remunamato wekuti Mwari tungamira gumbo redu munzira yekufamba.
1 Peter 5: 7 “Muchikandira pamusoro pake kufunganya kwenyu kose; nekuti ane hanya nemi. ”
Kana iwe uchinetseka zvakanyanya, kana moyo wako uzere nekushushikana kwakanyanya zvekuti hauzive zvekuita. Ichi ndicho chinyorwa chakanakisa kutanga zuva rako nacho. Iwe unotya here kutarisana neuyo wakaipa shefu nhasi? Kana iwe unofungidzira kuti iwe zuva harizoenda sezvakarongwa, zvisina kunetsekana. Mwari akavimbisa kutichengeta nekutora zvese zvinotinetsa uye zvinonetsa.
Isaya 45: 2 Ndichaenda pamberi pako ndigotwasanudza makoronga; Ndichaputsa-putsa misuwo yendarira, nokuguranya mazariro amatare.
Haufanire kunetseka. Ichi chivimbiso chinobva kuna Mwari. Akavimbisa kuenda pamberi pako zuva rega rega uye kukwirisa nzvimbo dzakakwirira. Izvi zvinoreva kuti simba raMwari Wemasimbaose richaenda pamberi pako uye richatora matambudziko ese kana matambudziko angamuka kuzorwa newe munzira. Iwe unongoda kudzidza rugwaro urwu uine rutendo mumoyo mako kuti sezvazvakanyorwa, zvichave zvakadaro.
Mikova yese yesimbi yakavharirwa iwe kuti unonokere maropafadzo ako ichavhuniwa nesimba raMwari Wemasimbaose.
VaFiripi 4: 19 Uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa zvose maererano nefuma yake mukubwinya naKristu Jesu.
Urwu rugwaro rwevimbiso yekuti Mwari vachatipa zvese zvatinoda. Hupfumi hwaMwari Baba haugone kusimbiswa. Chinyorwa chinotaura maererano nefuma yake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Izvi zvinoreva kushayikwa uye kushaikwa hakuzove chikamu chedu chezuva nezuva chehupenyu hwedu.
James 1: 5 “Kana mumwe wenyu achishaiwa uchenjeri ngaakumbire kuna Mwari, unopavhurira vose asingagunun'uni; uye achapiwa.
Kwemazuva ese isu tinoda imwe nhanho yehungwaru yekufamba nehupenyu. Hazvishamise kuti rugwaro runotiraira kuti kana tikashaiwa huchenjeri tinofanirwa kukumbira kuna Mwari anotipa pachena pasina gwapa. Huchenjeri hwaMwari hucha kukudzidzisa maitiro ekupindura hurukuro dzese dzauchazopindamo mukati mezuva rese.
Huchenjeri hwaMwari huchakubatsira kugadzirisa mamiriro ezvinhu akaoma senge hachisi chinhu.
Jeremiah 29: 11 "Nokuti ndinoziva zvirongwa zvandinoronga pamusoro penyu," ndizvo zvinotaura Jehovha, "kuronga kukuitira zvakanaka kwete kukukuvadza, kuronga kukupa tariro neramangwana."
Shandisa ichi chikamu cherugwaro kutora kubudirira kwezuva. Vakati zvirongwa zvavo kwatiri kubudirira uye kwete kutikuvadza. Izvi zvinoreva kuti njodzi dzese munzira medu dzinozotorwa nesimba muzita raJesu.
rugwaro kutanga zuva rako
Previous nyayaKunamata Points Kuti Tize Musungo Womuvengi
inoteveraNzira 5 Dzokudzivisa Upombwe Muwanano
Elvira Loor Chikunguru 23, 2021 At 4:08 am
Mavhesi makumi mashanu emuBhaibheri pane kubereka chibereko.
Minamato makumi matatu Yekubudirira Mune Bvunzo
110 Pfungwa dzeMunamato Yekuputsa Kwemari
10 Ndima dzeBhaibheri Kunyengetera Paunenge Uchida Kupodzwa